काँग्रेस सभापतिको लागि तीन सचिव मैदानमा – Janakpur News
newsjanakpur — May 23, 20180comment
जनकपुरधाम, २ जेठ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २६ महिनापछि नेपाली काँग्रेस धनुषाको १३ औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्र सोमबार भएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उद्घाटन गरेपछि अधिवेशन सुरु भएको हो । साबिकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा कोइराला र देउवा पक्ष बीच विवादको कारण क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेको थिएन् ।
गत वर्ष क्षेत्र नम्बर ५ को क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएपछि जिल्ला अधिवेशनको लागि तोकिएको तिथि पटक पटक सारिदै आएको थियो । कोइराला पक्षबाट पुर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव र पुर्वमन्त्री महेन्द्र यादव देउवा पक्षका छन् । साबिकको संरचना अनुसार हुन लागेको अधिवेशनमा १ हजार एक सय ५५ जना प्रतिनिधि छन् । जिल्ला सभापतिमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । उपसभापति निधिले पूर्वसचिव महेश शंकर गिरीलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । गिरीलाई जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बनाउने घोषणा यसअघि नै भएको थियो । कोइराला खेमाबाटै दुई जनाले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । निवर्तमान जिल्ला सचिव संतोष यादव र पूर्व सचिव विशेश्वर यादवले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जिल्ला सभापतिमा संतोषलाई उम्मेदवार बनाएको घोषणा गरे ।
संतोष अहिले जिल्ला कार्य समितिमा सचिव हुन् । यता, पूर्वसचिव विशेश्वर यादवलाई डा. चन्द्रमोहन यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका हुन् । पुर्व सभासद् समेत रहेका डा. यादवले संतोषको विरोधमा विशेश्वरलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका हुन् । ब्रम्हपुरीस्थित आप्mनै निवासमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. यादवले जिल्ला सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारको घोषणा गरेका छन् । पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले भानुचोकस्थित एक होटलमा सोमबार मध्यान्ह् पत्रकार सम्मेलन गरी आप्mनो प्यानलको घोषणा गरे । काँग्रेस धनुषाको नेतृत्व लिनका लागि उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । काँग्रेसकौ सक्रिय रहेको वर्तमान जिल्ला सचिव यादव उम्मेदवारी दिएका छन । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु, प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु, क्षेत्रिय सभापतिहरु, जिल्ला तथा विभिन्न भ्रातृ संस्थाका प्रमुख तथा सदस्यहरुको पनि सहभागिता रहेका थिए । जिल्ला सदस्यदेखि यात्राको शुरुवात गरेका यादव संगठन बनाउन सक्ने तथा सवैलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति रहेकाले उनको पक्षमा केन्द्रका अधिकांश नेताहरु भएको केन्द्रीय सदस्य यादवले दावी गरे । यता उम्मेदवारी घोषणा गरेका सन्तोषले आफू काँग्रेसको संगठन बनाउनका लागि कामकाज गरेको र पार्टीलाई जोडेर हिड्ने क्षमता भएकाले आफ्नो पक्षमा जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरुको व्यापक समर्थन र साथ भएको दावी गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरु भएको पनि उनले बताए ।सो प्यानलवाट जिल्ला कोषाध्यक्षमा उत्तिम प्रसाद मण्डल रहेका छन् । यसै जिल्ला सभापतिका लागि रामपल्टन साहले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेर अपिल नै उद्घाटन सत्रमा वितरण गरेका छन् । पुर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले पुर्व सभासद डा. यादवसितको छलफल असफल भएपछि आप्mनो प्यानलको नाम घोषणा गरेका थिए । उनीहरुबीच सभापति पदमा सहमति हुन नसकेको श्रोतले बताए । रामकृष्ण यादव संतोषको पक्षमा थिए भने डा. यादवले विशेश्वर यादवलाई अघि सारेका थिए ।
विशेश्वर यादवलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन पुर्वमन्त्री यादवले अस्वीकार गरेपछि छलफल अनिर्णित टुंगिएको थियो । सचिव पदका उम्मेदवार श्रीराम साह डा. यादवसँगै लागेपछि पुर्वमन्त्री यादव प्यानलको सचिवको उम्मेदवार खाली भएको छ । डा. यादवले पत्रकार सम्मेलनमार्पmत सभापतिमा विशेश्वर यादव, सचिवमा श्रीराम साह र कोषाध्यक्षमा रामस्वार्थ कापरलाई उठाउने घोषणा गरेका छन् । सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका तीनै जना जिल्ला सचिव भएर संगठनको काम गरिसकेका छन् ।
© 2018 Janakpur News - Theme by HappyThemes